» “अनि किन, नबढो,स् त शम्भु, थापा,को, फु’र्ती! परमादेश,को कमालले’ सपनामा,पनि नसोचेको ‘कुरा,विपनामै पाउँदै” “अनि किन, नबढो,स् त शम्भु, थापा,को, फु’र्ती! परमादेश,को कमालले’ सपनामा,पनि नसोचेको ‘कुरा,विपनामै पाउँदै” – हाम्रो खबर
“अनि किन, नबढो,स् त शम्भु, थापा,को, फु’र्ती! परमादेश,को कमालले’ सपनामा,पनि नसोचेको ‘कुरा,विपनामै पाउँदै”
2021, September 28th, Tuesday
“तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सरकारलाई ह,टा,एर परमादेश बाट शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन जोड बलले लाग्ने दुई जनालाई सत्ता गठबन्धनले मन्त्री बनाउने भए पछि को बन्छन् मन्त्री भन्ने चर्चा सुरु भएको छ ।”
“स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापालाई मन्त्री बनाउँन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा ,माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र नेकपा एसका अध्यक्ष माधव नेपाल तिनै जना राजी भएका छन् । थपालाई नागरिक समाजका, अगुवाका रुपमा बनाउँन लागिएको बताइएको छ ।”
“मन्त्रिपरिषद विस्तारमा थापालाई मन्त्री बनाउन नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले देउवालाई प्रस्ताव गरिसके,को बुृझिएको छ । देउवा थापालाई मन्त्री बनाउन सहमत भएका छन् ।”
“कानुनी रुपमा संसद नभएको मान्छे ६ महिना भन्दा बढि मन्त्री बन्न पाउँदैन । सांसद नभए पनि मन्त्री बन्न पाउँने व्यवस्था भए पनि उक्त व्यवस्था ६ महिना भित्र मन्त्री बन्ने आधार भएमा मात्रै लागु हुने तर्क कानुनविदहरुले गरेका छन् तर मन्त्री बन्न पाउँने भए पछि थापाहरुलेनै ,कानुनलाई घा,ममा सु,काउँन खोज्दै ,छन् ।”
“प्रतिनिधि सभा वि,घटन गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको क,दमवि,रु,द्ध शम्भु थापा कानुनी, कुरामा मा अ,ग्रपं,क्ति,मा थिए । उनले वि,घ,टनवि,रु,द्ध, नागरिक तहमा जनमत बनाउन पनि भूमिका खेलेका थिए ।नेपाल बार एशोशिएसनका, पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका थापा खरो, स्वभावका मानिन्छन् ।”
“यसैगरी, नागरिक समाजबाट वरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्द बन्दीको नाम पनि मन्त्रीका लागि चर्चामा छ । उनले पनि प्रतिनिधि सभा विघटनवि,रु,द्धको कानुनी लडाईंमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए । माधव नेपालका सम्धीका साडुभाई, बन्दीको नाम यस अघि पनि मन्त्री बन्नेमा चर्चामा, आएको थियो ।”
“माधव नेपालले ब,न्दी,लाई मन्त्री बनाउँन चाहे पनि शम्भु थापा अघि बढेको अवस्थामा बन्दीको हात खाली हुन सक्ने स्रोतको दावी छ ,। थापा र बन्दी दुवै माधव नेपाल निकट व्यक्ति हुन् , दुवै माधव नेपालका मान्छे र दुवै अधिवक्ता भएका कारण एक जना अधिवक्ता र एक जना बाहिरको व्यक्तीलाई म,न्त्री बनाउने तयारी भएको बताइन्छ ।”